Uyilungiselela njani i-Prestashop ye-SEO eyandisiweyo kunye neenguqulelo | Martech Zone
Uyilungiselela njani i-Prestashop ye-SEO eyandisiweyo kunye nokuGuqulwa
NgoLwesithathu, Juni 6, 2018 NgoLwesine, uJuni 7, 2018 U-Ashley Marsh
Ukuqhuba ishishini kwivenkile ekwi-intanethi kuyinto eqhelekileyo kwezi ntsuku zininzi kakhulu iivenkile ezikwi-Intanethi ezikhukula i-Intanethi. I-Prestashop yitekhnoloji eqhelekileyo emva kwiiwebhusayithi ezininzi ezinjalo.
I-Prestashop ngumthombo ovulekileyo wesoftware ye-e-commerce. Phantse i-250,000 (phantse i-0.5%) yewebhusayithi kwihlabathi liphela zisebenzisa i-Prestashop. Ukuba yitekhnoloji edumileyo, i-Prestashop ibonelela ngeendlela ezininzi apho isiza esakhiwe sisebenzisa i-Prestashop sinokulungiswa kwinqanaba eliphezulu kukhangelo lwe-organic (i-SEO) kunye nokufumana uguquko oluninzi.
Injongo yayo nayiphi na e-commerce isayithi kukutsala ukugcwala kwabantu kunye nokufumana ukuthengisa ngakumbi. Oku kunokufezekiswa ngokwandisa indawo ye-SEO.
Nazi iindlela ezimbalwa apho i-SEO inokwenziwa kwisiza se-Prestashop:
Yandisa iphepha lasekhaya- Ikhasi lakho lasekhaya lifana nendawo yakho yokugcina ngaphambili kwi-intanethi. Ke, ayifanelanga ukuba ibe nomtsalane kuphela kodwa kufuneka ikwindawo ephezulu kwiziphumo zokukhangela. Ukwenza njalo, kuya kufuneka ubandakanye umxholo kunye negama lakho eliphambili kunye nemifanekiso kwiphepha lasekhaya. Umxholo wephepha lasekhaya kunye nemveliso yakho ephambili akufuneki itshintshe rhoqo kuba emva koko injini yokukhangela ayinakukwazi ukumisela okubalulekileyo kuwe. Iphepha lasekhaya kufuneka likhawuleze ukulayishwa, ngaphandle kwempazamo, kunye nokubonelela ngamava okumnandi.
Misela amagama akho aphambili - Kubalulekile ukuba umisele amagama akho aphambili kwaye uvavanye ukusebenza kwabo usebenzisa isixhobo seNtengiso zikaGoogle ngoku esiyinxalenye yesicwangcisi samagama aphambili. Unokufumana ukukhangela kwenyanga kunye nokwasekhaya, ukubaluleka, kunye nokhuphiswano lwamagama aphambili. Amagama anokhuphiswano oluphakathi kunye nokhangelo lolona khetho lubalaseleyo kumagama aphambili. Esinye isixhobo ekufuneka siqwalaselwe ngu Semrush nangona sisixhobo sokuhlawula.
Amakhonkco angaphandle - Ukuba nonxibelelwano oluvela kwezinye iisayithi ukuya kwindawo yakho ikwayindlela eqhelekileyo ye-SEO. Unokuqhagamshelana neeblogger kwaye ucofe indawo zokukhupha. Iibhlog zinokuvuma ukubhala malunga nemveliso yakho kwaye zinike ikhonkco kwindawo yakho. Oku akuyi kunceda kuphela ekwakheni amakhonkco angaphandle kodwa kukonyusa nokubakho kwendawo yakho ekutsaleni ukugcwala kwezi zixhumanisi. Unokuphinda upapashe ukukhutshwa kwakho kumaphephandaba kwindawo ezahlukeneyo ekwangumthombo olungileyo wokutsala ukugcwala kwabantu kwindawo yakho. Enye indlela yokufumana amakhonkco angaphandle kukubhala izithuba zeendwendwe. Unokufumana ukuhanjiswa kwindawo yakho kwezi zithuba. Enye enye indlela kukukhangela iisayithi ezichaze indawo yakho ngaphandle kokubonelela ngekhonkco. Ungabacela ukuba babandakanye ikhonkco kwindawo yakho.
Gcwalisa lonke ulwazi ngemveliso olufunekayo- Gcwalisa onke amasimi afunekayo njengenkcazo yemveliso, iindidi, kunye nabavelisi abanomxholo wokuqala. Oku kubalulekile ngokwembono ye-SEO. Kwakhona, kuya kufuneka usoloko unikezela ngolwazi kwezi zilandelayo meta izihloko, inkcazo yemeta, kunye neelebhile zemeta kwiimakhishithi zolwazi lwemveliso. Kuya kufuneka unikezele nge-URL efanelekileyo.
Kubandakanya iindlela zokwabelana ngokwabelana ngokwasentlalweni- Ukuba namaqhosha okwabelana ngokwasentlalweni kwiiwebhusayithi zakho kuya kunceda ngokunjalo. Xa abantu babelana ngesiqulatho sakho nabahlobo babo, sonyusa amathuba okubatsalela kwindawo yakho. Ngale ndlela, unokufumana abathengi abatsha kwiwebhusayithi yakho.
Yenza imephu yendawo kunye neerobhothi.txt - Imodyuli yeGoogle Sitemap ikunceda ukuba wakhe imephu yendawo yakho kwaye uyigcine ihlaziywa. Yifayile yeXML edwelisa zonke iimveliso zesayithi kunye namaphepha. Imephu yesayithi isetyenziselwa ukwenza isalathiso samaphepha kwaye ngenxa yoko ibalulekile kwindawo yokujonga ye-SEO. robots.txt yifayile eveliswe ngokuzenzekelayo kwi-Prestashop kwaye yazisa abakhangeli be-injini yokukhangela kunye nezigcawu ukuba zeziphi iinxalenye zesiza se-Prestashop esingazichazanga. Kuyanceda ekugcineni i-bandwidth kunye nezixhobo zeseva.
Ukuba nekhalenda yesiqulatho kunye namanqaku anamagama aphambili- Ukuba indawo yakho inayo yonke imveliso ngalo naliphi na itheko, unokupapasha amanqaku ngaloo mihla kunye namanye amaphepha akhomba kweli phepha. Ungabhala amanqaku kubandakanya amagama aphambili abaluleke kakhulu kulo msitho. Nangona kunjalo, umntu akufuneki azame ukufaka amagama asentloko amaninzi kwinqaku elinye njengoko oku kunokuba nokudida injini yokukhangela.
Iwebhusayithi ekhawulezayo- Indawo ecommerce ecothayo inokuhlisa izinga lokuguqula, ukuthengisa kunye nenqanaba lokukhangela kwiinjini. Ke, kubaluleke kakhulu ukuba imithwalo yewebhusayithi ngokukhawuleza. Ezinye zeengcebiso zokuba newebhusayithi yokulayisha ngokukhawuleza zezi:
Imifanekiso esemgangathweni ekumgangatho ophantsi inokuyicothisa iwebhusayithi ngenxa yoko kubalulekile ukuba imifanekiso ilungiselelwe ukulayisha iwebhusayithi ngokukhawuleza.
Kuya kufuneka ususe zonke iimodyuli ezingafunekiyo njengoko zihlala zicothisa iwebhusayithi. Iimodyuli ezingenzi nto zinokwaziwa ngoncedo lokulungisa iifayile kwipaneli yePrestashop.
Ukusetyenziswa kwe-CDN (iNethiwekhi yokuNikwa koMxholo) kuya kunceda ukulayisha iwebhusayithi ngokukhawuleza nakwiindawo ezikude ukusuka kwiseva yokubamba.
Inkqubo yokufaka i-Caching ye-Prestashop okanye ezo zinikezelwe ngumntu wesithathu njenge-XCache, i-APC, okanye iMemcached inokusetyenziselwa ukukhawulezisa iwebhusayithi.
Ixabiso elikhutshiweyo le-query ye-MySQL yi-512 MB. Kuya kufuneka uliphucule ixabiso ukuba alisebenzi kakuhle.
I-Prestashop ibonelela nge-injini eyakhelweyo ngaphakathi yokwandisa itemplate ebizwa ngokuba yi-Smarty. Inokwenziwa ngemeko yokusebenza okungcono.
Sebenzisa iSchema.org - Ukumakisha i-Schema Unceda ukuphucula iiwebhusayithi ngokudala ischema yolwakhiwo lwedatha ekwabizwa ngokuba sisisityebi. Ixhaswa zizo zonke iinjongo eziphambili zokukhangela. Ithegi "yohlobo" inceda ukwahlula ukuba into ikhona kwiwebhusayithi, kwivenkile ekwi-intanethi okanye kwenye into. Inceda ukubonelela ngemeko kwamanye amaphepha angaqondakaliyo.
Sebenzisa iGoogle Analytics kunye neGoogle Search Console- Sebenzisa iGoogle Analytics kunye neGoogle Search Console kunokufakwa kwiwebhusayithi ngokubeka ikhowudi kwiwebhusayithi engabonakaliyo kubakhenkethi bakho. Uhlalutyo lukaGoogle lubonelela ngolwazi olusebenzayo malunga nokugcwala kwewebhusayithi ngelixa iGoogle Console yokuKhangela inceda ukufumana ukuba iwebhusayithi idweliswa kangaphi kwiziphumo zokukhangela kwaye ucofe idatha
Susa amaphepha aphindaphindiweyo- Akuqhelekanga ukuba amaphepha aphindwe kabini avela kwi-Prestashop. Bane-URL efanayo eneeparameter ezahlukeneyo. Oku kunokuthintelwa ngokuba nephepha elinye okanye ukusebenza kwisiseko se-Prestashop sesihloko esahlukileyo, inkcazo yemeta, kunye ne-URL kwiphepha ngalinye.
Sebenzisa ulungelelwaniso xa ufuduka - Ukuba ufudukela kwi-Prestashop usuka kwenye iwebhusayithi ungasebenzisa i-301 eqondisa kwakhona isigxina ukwazisa uGoogle malunga ne-URL entsha. Unokusebenzisa isixhobo esihambisa kwakhona.
Ukususa i-aksenti ye-URL - I-Prestashop 1.5 inokuvelisa i-URL ene-aksenti yaseSpain eyi-bug kwaye ifuna ukulungiswa.
Ukususa ii-ID- I-Prestashop igxininisa ekudibaniseni i-ID kunye neemveliso, iindidi, umenzi, umboneleli, kunye nephepha elisithintelo kwi-SEO. Ke, ezi ID zinokususwa ngokutshintsha isiseko okanye ukuthenga imodyuli yokususa ii-ID.
Ukongeza, i-Prestashop ikwabonelela ngemodyuli ye-SEO enokuba luncedo kakhulu ekuphatheni yonke imisebenzi ephambili ye-SEO. Injongo yalo naliphi na ishishini kukufumana ingeniso kwaye oko kunokwenzeka kuphela ngokufumana isikhundla esifanelekileyo kwiziphumo zeinjini yokukhangela. I-Prestashop ibonelela ngeendlela ezilula apho i-SEO inokumiliselwa khona ukwenza ukhetho olucacileyo kwi-e-commerce.
tags: kwenziwa kanjaninokwandisaPrestaShopSEO
U-Ashley Marsh nguMbhali woMxholo woMxholo apha Imbuyekezo Maan Softwares Inc. Uhleli nale nkampani kule minyaka mine idlulileyo. Ukhethekileyo kuhlobo lokubhala lobuchwephesha ngakumbi kuphuhliso lweselfowuni, uyilo lwewebhu, kunye, nakwiitekhnoloji zamva nje. Ngokutsho kwakhe, ibikukuveza okukhulu kuye njengoko suku ngalunye itekhnoloji ihlaziya ngokwayo ikhokelela kwizimvo ezintsha ezimgcina emtsha mihla le.
Ukuvelisa amandla: I-AI-Inikwe amandla i-Omnichannel yeTekhnoloji yoKwenza ubuNtu
I-Fathers Day ye-Ecommerce Statistics: Izinto ezi-5 Zonke iiMveliso zeMveliso kufuneka zazi